Yamuna Online Clinic ယမုန်နာ ဆေးခန်း: ဆေးခန်းကြော်ညာ
ဆေးခန်းကြော်ညာ • ခြင်တွေကပေါ၊ ချင်းတွေကများ၊ ဘိုဒဲလား။
• ဒုက္ခသည်များ ရောဂါမရှား၊ “ယမုန်နာ” ကို ကြွခဲ့ဗျား။
• သားဖွါးလူနာ၊ ကျေးဇူးပြု၍ဖုန်းဆက်ပါ၊
• ည ၁၂ နာရီ၊ “မမေရီ”၊ သန်းကောင်ကျော်ပြီ၊ “မနီနီ”၊
• ကသောကမြော “မချောချော”၊ ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာ ဖုန်းဆက်ပြော၊
• သဘောကောင်းတဲ့ ဆရာမတွေ၊ ဘရားသခင်စောင့်ရှောက်စေ။
• လူနည်းနေလျှင် ခေါ်ပါရှင်၊ အဲဒါ “ကင်မ်”၊
• စီမံစရာ “ချယ်ရီ” ပါ၊ ANC လာရင် “မအီဗင်”။
• ဆေးလိုချင်တော့ “ကိုဇော်သန်း”၊ ဆေးခန်းဝေးလည်း မပျက်လာ “နုနု” အလိမ်မာ၊
• အားလုံးပေါင်းတာ ယမုန်နာ။
• ဆရာဝန်တယောက် ကောက်လို့ရထား “ရဖြူဂျီ” များ၊
• ဗမာစကားမတတ်၊ ဆရာဝန့်နာမည်မသိ၊ ကိစ္စမရှိ၊ ဆရာမတွေရှိ။
• နိုင်ငံရေးလုပ်မှန်းမသိ၊ NLD ကမှန်းမသိ၊ ကိစ္စမရှိပါ၊ အဓိကဟာ ရောဂါပျောက်ဘို့သာ။
• ဆရာဝန်ဘာလုပ်၊ သွားနုတ်၊ အနာချုပ်၊
• စာအုပ်မှာ ဆေးစာရေး၊ ကလေးညှပ်ဆွဲမွေး၊
• ဆရာမလေးတွေ ဆေးစာသင်၊ စိတ်မထင်ရင် အော်ငေါက်၊
• ရေနွေးကြမ်းသောက်၊ မွေးလူနာထိုင်စောင့် ညလုံးပေါက်။
ဘိုဒဲလား = ရပ်ကွက်နာမည်၊ ANC = ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ရဖြူဂျီ = ဒုက္ခသည်၊ NLD = အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊
• Numerous mosquitoes and many Chins live
• The clinic in Bodella, it is
• Labor case! Just call please!
• Midnight to Merry, beyond that is to Ma Ni
• Emergency may call Ma Chaw Chaw
• God bless my benevolent clinic assistants all
• If necessary please call me said Kim to me
• Management will be by Cherry
• ANC is for Even Matupi
• Medicines will be given by Ko Zaw Than
• Nu Nu will come although she lives far-flung
“Clinic commercial add-on”
• A doctor has many refugees to treat
• Who don’t speak Burmese and don’t know his name either
• Doesn’t matter because there are interpreters
• They don’t know the doctor is political creature oramember of NLD either
• Doesn’t matter because it is just to cure
• What others the doctor will do?
• From tooth extraction to wound stitching and operations
• The prescriptions written in the booklets
• Forceps delivery if the baby is lazy to come out
• He may shout at while teaching the volunteers
• Then labor cases will punish him with sleepless nights
• But he likes plain tea and will sip all day and night
Posted by Dr. Tint Swe at 4:14 AM
ohmar khin April 19, 2013 at 5:47 AM
salute ပါဆရာ။ဆရာ့စိတ်ထားရော ဆောင်ရွက်ချက်တွေအတွက်ရော လေးစားပါတယ်
medical writings for over 18 ဖတ်ပြီးဆရာတော်တော်စိတ်ရှည်ပါလားဆိုတာသိရတယ်။လူတွေဟာလုပ်ချင်တာပဲသိတယ်၊ ဗဟုသုတမရှိ စာမဖတ် မလေ့လာ စိတ်ပျက်စရာပဲ၊ဖြစ်လာရင် သိကြားမင်းလို ဥုံဖွဆရာလိုက်ရှာ.. တော်ရုံကိစဖြေပေးမနေနဲ့။